Ankoatra ireo karazana arendrina vita Malagasy sy Sinoa miparitaka eny an-tsena dia efa re mirefodrefotra etsy sy eroa ihany koa ny tsipoapoaka. Manoloana ireny tranga ireny dia nanamafy ny mpitandro ny filaminana fa voararan’ny lalàna hatrany ny fampiasana tsipoapoaka mialoha sy mandritra ary aorian’ny fetim-pirenena 26 jona mba ho fitandroana ny filaminana. Hisy ny polisy sy zandary hitety tanàna hanara-maso izany raha ny fantatra. Ankoatra izay dia nambaran’izy ireo ihany koa fa hojerena akaiky ireo mpanafatra tsipoapoaka eto amintsika sy ireo mpivarotra minia mbola mivarotra . Hisy ny fitsirihana tampoka hotanterahina any amin’ireo mpanafatra tsipoapoaka. Noraisina izao fepetra izao satria mety misy ny olona manana eritreri-dratsy ka hanararaotra ny tsipoapoaka etsy sy eroa mba hanapoahana basy sy hanaovana asa ratsy, hoy ny prefen’Antananarivo. Tsiahivina fa efa nahafaty olona ny fahatairana vokatry ny fipoahan’ny tsipoapoaka teto amintsika. Nisy ihany koa ireo efa nitondra takaitra vokatr’izany’